OLAC Record: Fonds Denise Bernot, birman, 1964, bande 024, face Ab
Title: Fonds Denise Bernot, birman, 1964, bande 024, face Ab
Abstract: A boy and girl sing popular Burmese songs and children rhymes from the 1960s. The boy also tells two tales ; one whereatraveller is teachingamonkey the meaning of the Pali word ‘dukkha’ (problems) ; and another one whose main characters areawoman andafemale dog, each giving birth to the new borns of the other one.
Une petite fille et un jeune garçon chantent des chansons birmanes et des comptines pour enfants populaires dans les années 1960. Le garçon raconte ensuite deux histoires. L’une met en scène un voyageur qui enseigne à un singe la signification du mot pâli ‘dukkha’ (problems) ; et l’autre dont les personnages principaux sont une femme et une chienne, chacune condamnée à donner naissance aux nouveaux nés de l’autre.
ယောက်ျားလေးတဦးနှင့် မိန်းကလေးတဦးတို့ ၁၉၆၀ ခုနှစ်များက လူကြိုက်များသော ဗမာသီချင်းများနှင့် ကာရန်ညီသော ကလေးကဗျာကိုသီဆိုကြသည်။ ယောကျာ်းလေးသည် ဇာတ်လမ်း ၂ ပုဒ်ပြောရာတွင်၊ တပုဒ်မှာ ခရီးသည်တဦးသည် မျောက်တကောင်ကို ပါဠိစကားလုံး ဒုက္ခ၏ အဓိပ္ပါယ်ကိုသင်ကြားပေးခြင်းနှင့် နောက်တပုဒ်မှာ မိန်းမတဦးနှင့် ခွေးမတကောင်တို့ အဓိကပါဝင်သော ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး တဦး၏သားသမီးသည် အခြားတစ်ဦးထံတွင်သားသမီးအဖြစ် မွေးဖွားလာကြသောအကြောင်း ပြောပြသည်။
Alternative Title: Fonds Denise Bernot, Burmese, 1964, tape 024, side Ab
Description: Denise Bernot encourage une petite fille (la même que dans la bande 024-faceAa) à chanter des chansons populaires dans les années 1960, tirées de spectacles de danse ''a gnein'' (et chantées par les danseuses durant ces pwè ou spectacles birmans). Les principaux titres sont Maung Shwe Yo, Ma Nhinsi, etc.... (jusqu'à 2.50 min.) Puis un petit garçon chante aussi (Htwe Gno Lé) (jusqu'à 5.15 min.). Puis la fille chante à nouveau (Ma Beda) et récite ensuite les paroles des chansons chantées précédemment (jusqu'à 10.10 min.). Puis la fille et le garçon chantent des chants d'enfants et des comptines ensemble. Les chants sont chantés plusieurs fois, mais à des tempos différents. (jusqu'à 13.55 min.). Le garçon raconte ensuite un conte dans lequel un singe demande à voyageur de lui apprendre la signification de "dukkha" ("problème" en pâli et en birman). Le voyageur ligote un chien et le fait libérer par le singe. Le chien en colère se met à lui courir après et, en s'enfuyant, le singe crie " dukkha, dukkha " (jusqu'à 15.05 min.). Après cela, la fille récite les paroles de Ma Hninsi (jusqu'à 16.10 min.) Le garçon raconte à nouveau l'histoire du singe et du voyageur (jusqu'à 17.30 min.). Après d'autres chansons, il raconte l’histoire dans laquelle une femme qui, après avoir torturé une chienne, enfante ses chiots alors que la chienne enfante ses propres nouveaux nés, puis les élève. (de 18.35 min. jusqu'à la fin).
Denise Bernot invitesalittle Burmese girl (the same as in recording 024-side Aa) to sing popular ''a-nyein'' songs of the 1960s (Songs sung by female dancers in pwè, or Burmese traditional stage shows) (Songs titles: Maung Shwe Yo, Ma Nhinsi, etc...). (until 2.50 min.) Thenalittle boy sings the song Htwe Gno Lé (until 5.15 min.). Then the girl sings again (Ma Beda), and then recites the lyrics of the songs sung earlier (until 10.10 min.). After that, the girl and the boy sing rhymes and children songs together (several times but with different tempos) (until 13.55 min.). Next, the boy tells the tale whereamonkey asksatraveller to teach him the signification of “dukkha” (“problem” in Pali and Burmese languages). So the traveller tiesadog and then asks the monkey to free it. Once released, the angry dog chases the monkey who runs away screaming ''dukkha, dukkha'' (“problem”, “problem”) (until 15.05 min.). r” The girl recites the lyrics of the song Ma Hninsi (until 16.10 min.). The boy tells again the story of the monkey and the traveller (until 17.30 min.). After other songs, the boy tells the story ofawoman who, after having torturedafemale dog, gives birth to its puppies while the dog delivers the woman's babies and then raises them. (from 18.35 min. to the end).
ဒင်းနစ်ဘားနော့တ်သည် မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်ကို ဖိတ်ခေါ်၍ (အသံသွင်းချက် 024- Side Aa နှင့် ထပ်တူသည်) ၁၉၆၀ ခုနှစ်များဆီက လူကြိုက်များသော အငြိမ့်သီချင်းကိုသီဆိုစေသည်။ (ပွဲခင်း တွင်အမျိုးသမီးကခြေသည်များသီဆိုသောသီချင်း(သို့) မြန်မာ့ရိုးရာစင်ပေါ်တွင်တင်ဆက်သောပွဲ) (သီချင်းခေါင်းစဥ်များမှာ ရွှေရိုး၊ မနှင်းဆီ စသည်) (၂.၅၀ မိနစ်ထိ)။ ထို့နောက် အမျိုးသားငယ်တဦးသည် ထွေးညိုလေးသီချင်းကိုဆိုသည် (၅.၁၅ မိနစ်ထိ)။ ထို့ နောက် အမျိုးသမီးငယ်က (မဗေဒါ)သီချင်းဆိုပြန်သည်။ အစောပိုင်းကသီဆိုခဲ့သော သီချင်း၏ စာသားများကို ပြန်လည်ရွတ်ဆိုပြသည် (၁၀.၁၀ မိနစ်အထိ)။ ထို့နောက်တွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားငယ်တို့သည် ကာရန်ညီသောကဗျာနှင့် ခလေးချော့ သီချင်းများကို အတူတကွ အသံအနိမ့်အမြင့် အလျင်မတူကွဲပြားစွာဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် သီဆိုသည် (၁၃.၅၅ မိနစ် အထိ)။ ထို့နောက် အမျိုးသားငယ်သည် မျောက်တကောင်က ခရီးသည်တဦးကို ဒုက္ခ (မြန်မာနှင့် ပါဠိဘာသာတွင် “ပြဿနာ”) ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို သင်ကြားပေးရန်တောင်းဆိုသော ဇာတ်လမ်းတခုကို ပြောသည်။ ထို့ကြောင့် ခရီးသည်သည် ခွေးတကောင်ကိုကြိုးဖြင့်ချည်၍ မျောက်ကို ကြိုးဖြည်၍ လွတ်ပေးစေသည်။ ကြိုးမှလွတ်သည်နှင့် စိတ်ဆိုးနေသောခွေးသည် မျောက်ကိုလိုက်သည်။ မျောက်သည် ဒုက္ခ ဒုက္ခဟု အော်ဟစ်ရင်း အဝေးသို့ပြေးထွက် သွားရသည် (၁၅.၀၅ မိနစ်ထိ)။ အမျိုးသမီးငယ်သည် မနှင်းဆီ သီချင်းမှစာသားများကိုပြန်လည်ရွတ်ဆိုပြသည် (၁၆.၁၀ မိနစ်ထိ)။ အမျိုးသားငယ်သည် မျောက်နှင့်ခရီးသည်ဇာတ်လမ်းကိုတဖန်ပြန်ပြောပြသည် (၁၇.၃၀ မိနစ်ထိ)။ အခြားသောသီချင်းများပြီးနောက်တွင် အမျိုးသားငယ်က ဇာတ်လမ်းတခုပြောရာတွင် မိန်းမတ ယောက်သည် ခွေးမတကောင်ကိုနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခဲ့သဖြင့် သူမ၏ကလေးသည် ခွေးမထံတွင် ခွေးသားငယ်များအဖြစ်မွေးဖွားလာကာ၊ ခွေးမ၏ကလေးငယ်များသည်လည်း သူမ၏ကလေး အဖြစ် မွေးဖွားလာပုံ ဇာတ်လမ်းကိုပြောသည် (၁၈.၅၅ မိနစ်မှအဆုံးအထိ)။
Identifier: Ancienne cote: crdo-BER_1964_BUR_024_Ab
Identifier (URI): https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-eb866766-edeb-3662-b88a-48d5a52f1410
Is Format Of (URI): https://cocoon.huma-num.fr/data/bernot/private_bernot/masters/BER-1964-BUR-024-Ab.wav